ဝတ္ထုဖတ်ရင်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခံစားနေရသလို စီးမျောသွားမယ့် ရသစာအုပ်(၃)အုပ် -
Posted on March 15, 2019 Author Stella	Comment(0)
အဟောင်းတွေထဲက အကောင်းလေးတွေ ရွေးပေးထားပါတယ် 🥰🥰
ယောင်းရေ…ဒီတစ်ပတ်ရုံးပိတ်ရက်မှာ ဘယ်မှမသွားဘူး အေးအေးဆေးဆေး အိမ်မှာပဲနေမယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းတွေအတွက် စာအုပ်အညွှန်းလေးအလှည့် ပြန်ရောက်လာပါပြီနော်။ အခု Stella ညွှန်းပေးမယ့် စာအုပ်လေးတွေက ဖတ်ပြီးရင် တသသဖြစ်နေရစေမယ့် လက်ရာတွေမို့ ဖုန်းလေးတွေ နှစ်ရက်လောက်ချပြီး စာအုပ်ကမ္ဘာထဲ ဝင်ကြည့်လိုက်ကြပါစို့…
ဒီစာအုပ်ကတော့ ဆရာမင်းလူရဲ့ လက်ရာတွေထဲမှာ Stella အတွက် ရင်ထဲအထိဆုံးပါ။ ငယ်ဘဝက နာကြည်းချက်တွေကြောင့် ဘဝကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ခင်ခိုင် နဲ့ လူရိုးလူဖြောင့် ခပ်အေးအေးနေချင်သူ ငြိမ်းမောင် တို့လင်မယား။ ခင်ခိုင်က နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်သွားခါနီးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာလို့ ပညာတော်သင်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်။ မွေးလာတဲ့ သားမောင်ကလည်း ဥာဏ်ရည်မမီတဲ့ ကလေးဖြစ်နေပြန်တယ်။ သူတို့မိသားစုကြားမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်လာမလဲ ၊ ခင်ခိုင်ကကော သားမောင်အတွက် သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို အဆုံးရှုံးခံမှာလား ၊ ဥာဏ်ရည်မဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုပျိုးထောင်မှာလဲစတာတွေကို ဆရာမင်းလူက “ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ” မှာ ကလောင်သားထက်ထက် သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။
ကြွေ…တစ်ပတ်လျှိုဆံထုံး၊ မာနရိပ်ကင်းတဲ့ မျက်ဝန်းညိုညို၊ အေးချမ်းငြိမ်သက်တဲ့အသွင်နဲ့ ကြွေ။ သူ(မ)ဘဝရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ခင်တွယ်စရာ ကိုလေး။ လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ကြွေ။ ဒီ ကြွေဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကိုမှ ချစ်မိတဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား မောင်မောင်။ ကြွေ့ဘဝမှာ ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေလဲ၊ မောင်မောင်ကကော ကြွေ့ကို အိမ်မက်ဆိုးတွေကနေ ကယ်တင်နိုင်မှာလား၊ ကိုလေးဆိုတာကကော ဘယ်သူလဲ ? ရယ်မောစရာတွေရော ရင်မောစရာတွေရောကို ဆရာမ မစန္ဒာရဲ့ဟန်အတိုင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရေးထားတာဖြစ်လို့ “ပန်းစကား” ကို ယောင်းတို့အကြိုက်တွေ့မှာပါ။
အဟောငျးတှထေဲက အကောငျးလေးတှေ ရှေးပေးထားပါတယျ 🥰🥰
ယောငျးရေ…ဒီတဈပတျရုံးပိတျရကျမှာ ဘယျမှမသှားဘူး အေးအေးဆေးဆေး အိမျမှာပဲနမေယျဆိုတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ စာအုပျအညှနျးလေးအလှညျ့ ပွနျရောကျလာပါပွီနျော။ အခု Stella ညှနျးပေးမယျ့ စာအုပျလေးတှကေ ဖတျပွီးရငျ တသသဖွဈနရေစမေယျ့ လကျရာတှမေို့ ဖုနျးလေးတှေ နှဈရကျလောကျခပြွီး စာအုပျကမ်ဘာထဲ ဝငျကွညျ့လိုကျကွပါစို့…
ဒီစာအုပျကတော့ ဆရာမငျးလူရဲ့ လကျရာတှထေဲမှာ Stella အတှကျ ရငျထဲအထိဆုံးပါ။ ငယျဘဝက နာကွညျးခကျြတှကွေောငျ့ ဘဝကိုအမွငျ့ဆုံးရောကျအောငျ ကွိုးစားနတေဲ့ ခငျခိုငျ နဲ့ လူရိုးလူဖွောငျ့ ခပျအေးအေးနခေငျြသူ ငွိမျးမောငျ တို့လငျမယား။ ခငျခိုငျက နိုငျငံခွားပညာတျောသငျသှားခါနီးမှာ ကိုယျဝနျရှိလာလို့ ပညာတျောသငျကို စှနျ့လှတျလိုကျရပါတယျ။ မှေးလာတဲ့ သားမောငျကလညျး ဉာဏျရညျမမီတဲ့ ကလေးဖွဈနပွေနျတယျ။ သူတို့မိသားစုကွားမှာ ဘယျလိုအခွအေနတှေေ ဖွဈလာမလဲ ၊ ခငျခိုငျကကော သားမောငျအတှကျ သူ့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှကေို အဆုံးရှုံးခံမှာလား ၊ ဉာဏျရညျမဖှံ့ဖွိုးတဲ့ကလေးတဈယောကျကို ဘယျလိုပြိုးထောငျမှာလဲစတာတှကေို ဆရာမငျးလူက “ရငျထဲကဆောငျးရာသီ” မှာ ကလောငျသားထကျထကျ သရုပျဖျောထားပါတယျ။
(၃) ပနျးစကား – မစန်ဒာကွှေ…
တဈပတျလြှိုဆံထုံး၊ မာနရိပျကငျးတဲ့ မကျြဝနျးညိုညို၊ အေးခမျြးငွိမျသကျတဲ့အသှငျနဲ့ ကွှေ။ သူ(မ)ဘဝရဲ့ တဈဦးတညျးသော ခငျတှယျစရာ ကိုလေး။ လြှို့ဝှကျခကျြတှနေဲ့ ကွှေ။ ဒီ ကွှဆေိုတဲ့ မိနျးကလေးကိုမှ ခဈြမိတဲ့ စကျမှုတက်ကသိုလျကြောငျးသား မောငျမောငျ။ ကွှဘေ့ဝမှာ ဘယျလိုလြှို့ဝှကျခကျြတှရှေိနလေဲ၊ မောငျမောငျကကော ကွှကေို့ အိမျမကျဆိုးတှကေနေ ကယျတငျနိုငျမှာလား၊ ကိုလေးဆိုတာကကော ဘယျသူလဲ ? ရယျမောစရာတှရေော ရငျမောစရာတှရေောကို ဆရာမ မစန်ဒာရဲ့ဟနျအတိုငျး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရေးထားတာဖွဈလို့ “ပနျးစကား” ကို ယောငျးတို့အကွိုကျတှမှေ့ာပါ။
Posted on September 29, 2018 Author Hnin Ei Oo
ဆရာတို့ရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေကို အထင်းသားမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေး (၂) အုပ်
Posted on June 29, 2018 July 25, 2018 Author Sugar Cane
ရေမြေတွေခြားနား၊ ဓလေ့စရိုက်တွေကွာခြား၊ လူမျိုးချင်းမတူကြပေမဲ့ ဆရာတွေနဲ့တပည့်တွေကြားက စေတနာမေတ္တာတွေ တူညီမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာ